Nsọpụrụ ụbọchị: nkuzi na nchekwa nke ndị nsọ
Ebube nke ndi nso. Soro mmụọ soro bata n’eluigwe; lee lee ka nkwu ole ji fee ebe ahụ; tinye onwe gi na umu agbogho, ndi nkwuputa, ndi nwuru n’ihi okwukwe, ndi ozi, ndi nna ochie; lee ọnụọgụgụ na-adịghị agwụ agwụ! .., Lee ọ joyụ dị n'etiti ha! Lee abụ na-enye ọ ,ụ, nke otuto, na nke ịhụnanya maka Chineke! Ha na-enwu dị ka ọtụtụ kpakpando; ebube ha dịgasị iche dị ka ihe ruru; ma ha niile nwere obi ụtọ, ndị na-eru uju mikpuru n'ime obi ụtọ nke Chineke! ... Nụrụ ọkpụkpọ oku ha: Gị onwe gị kwa; edoziri oche gị.
Ihe omumu nke ndi nso. Ha niile bụ ndị ụwa; lelee ndi ị hụrụ n'anya ndi setịpụrụ gị aka ha ... Ma ọ bụrụ na ha ruru ya, gịnị kpatara na ị gaghị enwekwa? Ha nwere ochicho obi ayi, otu onwunwa, ha hutara otu ihe egwu ahu, ha chọtara ogwu, obe, nkpagbu; ma ha meriri: ma anyị agaghị enwe ike? Ekpere, nchegharị, na Sakrament, ha zụtara Eluigwe, kedụ ihe ị na-akpata ya?
Nchedo nke Ndi-nsọ. Mkpụrụ obi ndị nọ n'eluigwe anaghị enwe mmetụta, na ntụle, na-ahụ anyị n'anya n'ezi ịhụnanya, ha chọrọ ka anyị bụrụ akụkụ nke akara aka ha gọziri agọzi; Onye-nwe-ayi n offersnye ha dika ndi-nche, ningnye ha ike di uku kari ayi. Ma gịnị mere na anyị anaghị arịọ maka enyemaka ha? Obu na ha agharo iduputa anyi n’elu igwe megide uche anyi?
OMUME. - Gụọ Litany nke ndị nsọ, ma ọ bụ Pater ise, na-arịọ onye ọ bụla maka amara maka gị.